श्रीमान् र घरपरिवार भन्दा पहिले आफैलाई प्रेम गर्नुहोस् , स्वयंसँग प्रेम कसरी सम्भव हुन्छ ? – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /रोचक/श्रीमान् र घरपरिवार भन्दा पहिले आफैलाई प्रेम गर्नुहोस् , स्वयंसँग प्रेम कसरी सम्भव हुन्छ ?
आफूलाई स्वीकार गर्नुहोस् : जब तपाइर्ं स्वयंसँग विनाशर्त प्रेम गर्नुहुन्छ, त्यो गुणले तपाईंलाई अरुसँग प्रेम गर्ने योग्यतामा पनि वृद्धि गर्छ । भनिन्छ, स्वयंसँग प्रेम गर्नु स्वास लिनु जस्तै हो । तर हामी स्वयं र आफ्नो सपनाबाट आफूलाई अलग बनाउँछौ र दुःखी रहन्छौं । त्यसैले लेखिका जिन्नी डिटजलरले स्वयंसँग जोडिनका लागि केही त्यस्तो व्यवहारिक तरिका बताएकी छिन्, जसमा मिठो खानु, ध्यान गर्नु, आधुनिक कपडा लगाउनु, दान दिने कला र जीवनको उद्देश्य प्राप्त गर्नु आदि छन् । १०० दिने नियम : तपाईं स्वयं आफूलाई प्रेमले भरिएको आलिङ्गन दिनुहोस् । स्वयंसँग प्रेम गर्नु भयो भने आजीवन प्रेम प्राप्त हुन्छ । १०० दिनमा १०० तरिकाले प्रेम गर्नु पर्छ । मानिस स्वयंले आफ्नो हेरचाह गर्नु पर्छ । जीवनप्रति लगाव राख्दै आफ्नो भावनाहरुलाई व्यक्त गर्नु पर्छ । तपाईं विभिन्न कुरालाई विभिन्न तरीकाले प्रतिदिन व्यवहारमा ल्याउने गर्नुहोस्, जसले तपाईं स्वयंसँग प्रेम गर्न शुरु गर्न सक्नु हुन्छ । यसको साथै आफ्नो जीवनको उद्देश्य निर्धारण गरेर लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्नु हुन्छ ।
पूर्वाग्रह नराख्नुहोस् : जीवनमा पूर्वाग्रहलाई स्थान दिनु हुँदैन । सम्भव भएसम्म क्षमादाता बन्नुहोस् । जीवनमा सुगम यात्राको लागि व्यक्तिले पूर्वाग्रहहरुको अतिरिक्त भारबाट समयअनुसार मुक्त हुनु आवश्यक हुन्छ । आवश्यक परेमात्र व्यक्तिले एक स्थानमा रोकिनु पर्छ । तपाइर्ंको नकारात्मक आचरण, तपाईंको रिस, द्वन्द्व, क्रोध र उदारताको कमीजस्ता कुराहरुले तपाइर्ंलाई राम्रो सम्बन्ध बनाउन रोक्छ । स्वयंको शत्रु हामी स्वयं नै हौं । कठोर आलोचक पनि हामी स्वयं नै हौ । हामीले आफूलाई राम्रो-नराम्रो जस्तो भए पनि स्वीकार गर्नु पर्छ ।
अरुको अधीनमा नचल्नुहोस् : यदि तपाईं सामान्य जीवन बाँच्नुहुन्छ भने पनि मौका मिलेको समयमा पूर्णआनन्द लिन आफूलाई रोक्नु हुँदैन । हामी स्वयं नै सुख र विवादको मुख्य स्रोत हौं । हामी सबै मानव हौं र गल्ति गर्नु मानवीय प्रवृत्ति हो । श्रेष्ठताको लागि अरुको अधीनमा नचल्नुहोस् र स्वयंको बारेमा गलत राय पनि नबनाउनुहोस् । जीवनमा उतार-चढावको कारण स्वयंलाई जीवनको आनन्दमयी क्षणहरुको आनन्द लिनबाट वन्चित गनर््ु हुँदैन । स्वयंसँग प्रेम कसरी सम्भव हुन्छ ?स्वयंसँग प्रेम गर्न कमसेकम ५ मिनेट दैनिक ध्यान गर्नुहोस् । जसले जीवनलाई प्रभावशाली तरीकाले जीउनयोग्य बनाउँछ । ध्यानले स्मरणशक्ति पनि बढ्नुका साथै दुःखसँग लड्न सिकाउँछ, जसले तपाईं आफ्नो आवेशलाई रोक्न सक्नु हुन्छ । ध्यानले तपाईंको मानसिक स्वास्थ्य पनि बढ्ने भएकाले तपाईंले स्वयंसँग प्रेम गर्न थाल्नु हुन्छ ।
पारिवारिक समस्या : तपाईंलाई निरन्तर सम्झाइरहँदा पनि तपाईंले आफ्नो जीवनसाथी, घरको बिल, साँचो र घरको अन्य आवश्यक सामान सही ठाउँमा राख्नु भएन भने समस्या कहिले सकिँदैन र तीनै कुरा तपाइर्ंको तनावको कारण पनि बन्छन् । यस्ता कुराहरुसँग अल्झेर बस्नुभन्दा जुन व्यक्तिसँग आफ्नो सुख-दुःखको साथी भनेर विवाह गर्नु भएको छ ऊसँग आफ्ना चिन्ता, घरको व्यवस्था र निजी आवश्यकताका कुराहरुलाई सहज तरिकाले बताउनु होस् । त्यस्तै दाम्पत्य जीवनको महत्वपूर्ण कुरा यौन सम्बन्धमा पनि केही समस्याहरु छन् भने एक-अर्कासँग खुलेर बताउनु पर्छ । दुईमध्ये कोही एकलाई यौनप्रति अभिरुचि नहुनु भनेको दाम्पत्य जीवनमा पूर्णविराम लाग्ने स्थिति पनि आउँछ । यौनसम्बन्ध तपाईंको लागि केवल औपचारिकता मात्र नभइ एउटा आवश्यकता पनि हो । यदि तपाईंको पार्टनर यौनसम्बन्धको लागि इच्छुक छैन भने यसप्रति इच्छा जगाउने धेरै तरीकाहरु छन् । यस्ता तरिकाहरुले दुवैमा यौन इच्छा जागृत भएर दुवैले यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्नु हुन्छ ।
कामकाजी समस्या : हिजोआज अफिसबाट घर फर्केपछि पनि पुरुषहरु घरमा ल्यापटप अथवा मोबाइलमा व्यस्त रहन्छन्, जुन श्रीमतीको रीसको कारण बन्छ । सम्पूर्ण दिन अफिसको काममा व्यस्त रहेर घर फर्केपछिको समय आपसी कुराकानीको लागि हुन्छ ।
यदि तपाइर्ंको जीवनसाथी ल्यापटप अथवा फोनकलमा व्यस्त हुन्छन् भने आपसी मनमुटाव र बहस गर्नुभन्दा सही समय हेरेर प्रेमपूर्वक आफ्नो पार्टनरलाई सम्झाउनु पर्छ । दाम्पत्य जीवनमा एक-अर्कासँग समय बिताउनु र कुराकानी गर्नु अति नै आवश्यक हुन्छ । यदि सधैं समय मिल्दैन भने हप्ताको एकपटक मात्र भए पनि एक-अर्कासँग भरपुर समय बिताउनु पर्छ । जीवनलाई रसिलो बनाउनको लागि चुम्बनको सार्थकतालाई नकार्न सकिँदैन । यो सम्बन्धमा गरिएको एक सर्वेक्षणको निष्कर्षअनुसार अफिस, बच्चा, बानी र पारिवारिक उत्तरदायित्वका कारण विवाहित युगल दिनमा केवल चार मिनेटमात्र साथ रहन्छ । त्यसैले उनीहरुले चुम्बन अथवा प्रेमवार्तालाई दिएको खण्डमा दाम्पत्य जीवनमा खुशीयाली कायम रहन्छ ।
भारतलाई चीनको चेता’वनी–‘सीमामा तना’व बढे चीन, पाकिस्तान र नेपाली सेनाको द’बाब झे’ल्नुपर्नेछ’